an-trano > Tapakilan'ny fiaran-dalamby SBB mora vidy sy ny làlan'ny dia
Eto ianao no afaka mahita ny fampahalalana rehetra momba Tapakilan'ny fiaran-dalamby SBB mora vidy SY SBB vidin'ny dia ary tombony.
ny Lalam-by Federalin'i Soisa, SBB, no orinasa nasionalin'ny lalamby izay miasa any Suisse.
Ny lamasinina SBB dia laharana eo an-tampon'ny rafitry ny lalamby any Eropa, ary ao 2017 laharana voalohany amin'ny kalitaon'ny serivisin'izy ireo, filaharan'ny fiarovana, sy ny index index.
Ny serivisy fiaran-dalamby SBB dia iray amin'ireo serivisy fiaran-dalamby ara-potoana indrindra eto amin'izao tontolo izao, miaraka amin'ny latsaky ny 3 fanemorana minitra antonony.
Ny tionelina lava indrindra an'ny SBB, ny tionelina Gotthard Base, in the Nanketo Alpes eto Soisa, fepetra 57.1 kilometatra ary mametraka rakitsoratra manerantany.
Ny orinasam-by nasionalin'ny SBB Soisa miasa manerana an'i Suisse rehetra, amin'ny 798 gara, SY 721 tapakila amidy tapakila fiaran-dalamby. Ny orinasan-dalamby SBB dia an'ny fanjakana nanomboka tamin'ny 1 Janoary, 1999, midika hoe mihazona ny fanjakana federaly 100% ny anjara.
isa 1: Raiso mialoha ny tapakilan'ny SBB arak'izay azonao atao
isa 2: Fitsangatsanganana ataon'ny SBB mandritra ny fotoana tsy an-tampon'ny tampony
isa 3: Omeo baiko ny tapakilan'ny SBB rehefa azonao antoka ny fandaharam-potoanananao
Fiaran-dalamby SBB tena mitaky mafy, ary miaraka amin'ny irery 2 orinasan-dalamby hafa toy ny fifaninanana, izy ireo amin'izao fotoana izao no mijanona ho safidy ambony indrindra ho an'ny lamasinina any Suisse. Azon'izy ireo atao ny mametraka ny fetra fidina amin'ny fiaran-dalamby toy ny ananan'izy ireo izay mandrara ny fifanakalozana tapakila na famerenam-bola raha tsy izany no karazan'orinasa mpandraharaha. Na dia mbola misy tranokala ahafahanao mivarotra ny tapakila faharoa amin'ny olona, Tsy avelan'ny SBB hivarotra tapakila faharoa. Ahoana no fomba hanampianao vola hitehirizana vola? Alao fotsiny ny tapakilan'ny tapakila raha azonao antoka fa hamonjy anao amin'ny famandrihana tapakila iray indroa ny tapakilanonao satria misy zavatra tonga ary tsy afaka mampiasa tapakila tany am-boalohany ianao.
isa 4: Vidio ny tapakilan'ny SBB amin'ny Save A Train
Ny tapakila SBB dia manomboka amin'ny € 12,50 ka hatramin'ny 125 € ho an'ny dia lamasinina tokana. ny vidin'ny tapakila fiaran-dalamby SBB miankina amin'ny karazana tapakila, toerana halehany, ary rehefa misafidy ny handeha ianao:
Malagasy € 12,50 – € 35 € 28 – € 55
1) Tonga any amin'ny City Center. Tombony iray amin'ny fiaran-dalamby SBB raha ampitahaina amin'ny fiaramanidina. Fiaran-dalamby SBB sy ny rehetra fitsangatsanganana lamasinina hafa manomboka amin'ny toerana rehetra ao an-tanàna ka hatrany afovoan'ny tanàna manaraka, tsy maninona na a tahiry voajanahary na vohitra. Izy io dia mamonjy fotoana sy ny vidin'ny taksiam-piaramanidina avy any amin'ny seranam-piaramanidina mankany afovoan-tanàna. Mijanona ny fiaran-dalamby, moramora kokoa ny mankany amin'ny toerana mankamin'ny tanàna alehanao. Tsy maninona na aiza na aiza ianao, Geneva, Basel, Zermatt, na Zurich, tombony lehibe amin'ny fiaran-dalamby SBB ny fijanonana afovoan-tanàna!
ny Tapakilan'ny SBB Standard no mora miovaova indrindra amin'ny tapakila SBB rehetra. Ity tapakilan'ny lamasinina ity dia natao ho an'ny teboka 1 lalana na lalan-by. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ny tapakila mahazatra SBB dia ny carte de voyage mahazatra. tena zava-dehibe, ity tapakilan'ny lamasinina ity dia manan-kery mandritra ny tontolo andro nofidinao tamin'ny fotoana nividiananao, ary mandra-pahatongan'ny 5 ny ampitso. Ankoatry ny, azonao atao ny mividy tapakila point-to-point SBB ho an'ny kilasy 1 sy 2. Tombony lehibe iray hafa an'io tapakila manondro isa io ny ankizy hatramin'ny taona 6 mandeha malalaka. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, afaka mivezivezy amin'ny toerana tianao ianao sy amin'ny kilasy rehetra, amin'ny dianao avy any A mankany B.
Mba hahazoana ny SBB anao ary ho ara-potoana, ny gara dia manome soso-kevitra fa tonga farafaharatsiny 1 adiny iray mialoha ny hiaingan'ny fiaran-dalamby SBB-nao. Izahay ao amin'ny Save A Train hatramin'ny nandehananay nandeha tamin'ny lamasinina SBB, fahazoan-dàlana tonga ara-potoana 30 minitra mialoha, noho izany dia tsy mila maika ny hamaky ireo gara lehibe ianao hisamborana ny lamasinina. Ankoatry ny, Ny ora iray dia fotoana ampy ampy hankafizana ireo fivarotana sy toeram-pisakafoanana ary hahazoana ireo entana ilainao ilain'ny Ny fitsangatsanganana lamasinina mba ho malefaka araka izay azo atao.
Eny. Azonao atao ny mifaly maimaim-poana Wifi serivisy amin'ny lamasinina SBB rehetra ary ny kilasy fitsangatsanganana rehetra hatramin'ny 60 minitra.
Te hampidirina amn'ny tranokalanao ity pejy ity? kitiho eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-sbb%2F%3Flang%3Dmg – (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code), Na azonao atao rohy mivantana ao amin'ity pejy ity.